फेसबुकमा ‘भेडा’ भन्दा करिश्मालाई गालीको बर्षा « Ramailo छ
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले शुक्रबार राती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरिन् । यसै वर्ष एसइइ पास अभिनेत्रीको उक्त स्टाटस केही बेरमै भाइरल बन्यो । भाइरल पनि यसरी बन्योको पहिलो स्टाटस लेखेको केही बेरमै करिश्मा फोटो सहितको अर्को स्टाटस पोष्ट गर्न बाध्य भइन् ।
‘राज्यले गर्नुपर्ने कामकाज निजितवरबाट हुनु खतरनाक हुन्छ । नत्र किन चाहियो संसद, संविधान, राज्य समयन्त्र ? यत्रो तिरो तिरी रहेको छौं । तपाईंहरुले नैतिकता नगुमाएको भए यो समस्या आउने थिएन् । अब गंगामा हात धुनेले आँट गरे । पहिल्यै भनेको थिए यस्तो स्वतन्त्रताले अराजकता निम्त्याउँछ । सानो देशको व्यवस्था र सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने कस्तो सरकार ? अब भोग्नुस ! भेडाहरु को कोलाहाल ! सत्य तितो हुन्छ ।’
यस प्रकारको स्टाटस लेखेपछि कमेन्टमा गालीको बर्षा सुरु भयो । विशेषगरी जनतालाई भेडा भनेकोमा धेरैले कमेन्टमा करिश्माको कटाक्ष गरेका छन् । हिरासतमा रहेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका समर्थकको गाली थेग्न नसकेपछि करिश्माले आफ्नो स्टाटसको आशय बुझाउन पुनः अर्को स्टाटस लेखेकी छन् । ‘आदरणियहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने कुनैपनि शब्दको अतिवादी सोच बनाउदै त्यसको काल्पनिक अर्थ नलगाई दिनु होस, म पनि जनताले नै बनाएको मानिस हुँ , समाज प्रति उत्तरदायित्व महसुस गर्ने मानिस हुँ । त्यसैले जब केही चित्तबुझ्दो नलागेमा सामाजिक संजालमा केही लेख्ने गर्छु । अस्ति लेखेको लेखमा जुन शब्द प्रयोग गरेको थियो त्यसमा जनतालाई भेडा भनेको होइन, भेडो सोझो हुन्छ, खराब होइन ! त्यो भेडोपनलाई इन्कित गरेको हुँ, करिश्माले लेखेकी छिन्,
नेपालको जनसंख्या २६४९४५०४ सबै मेरा प्यारा र आदरणिय हुनुहुन्छ , वहाँहरुको मायाले आज यो कलाकार करिश्मा मानन्धर छ । तर के चाहिँ हो भने कतिपय अवस्थामा हाम्रो अग्रिम या छिटो प्रतिक्रियाले परिस्थिति असहज बनाउछ , कतिपय कुरामा राज्यको कामकारबाही असहज हुन्छ, हामी एउटा कानुनी राज्यमा बस्छौं कि त यो देशको कानुन नमान्न पर्यो कि राज्यलाई सहयोग पुराउनु पर्यो ! राज्यको कामकारबाही सहि नभएमा अवस्य पनि आपत्ति उठाउनु पर्छ । सहि तरिकाले काम गर्नु शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । फेरि यो मैले अहिले भैरहेको केस बारे भनेकै होइन यो हरेक केसमा हो । राज्यले सहि तरिकाले कामकामकारबाही गर्न असमर्थ भएका कारण अराजकता फैलियो भनेको हुँ ।
अन्त्यमा, मेरो शब्दले मेरो शब्द आफुलाई भनेको हो भनेर रिसाउनु भएको छ भने माफ गरिदिनु होला । त्यो कुनै व्यक्तिलाई भनेको होइन प्रवृतिलाई भनेको हुँ जसबाट हामी सबै बच्नु पर्छ ।’